E nwere ngwaahịa ọhụrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ahịa, gịnị kpatara LVT enweghị ike ịgbanwe agbanwe? -Nke akụkọ-Topflor China nwere oke
E nwere ngwaahịa ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ala, gịnị kpatara LVT enweghị ike ịgbanwe agbanwe?
Echiche:7 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-06-01 Mmalite: Saịtị
LVT bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu na ahịa ahịa ụlọ. Ọ nwere ụdị ederede dị iche iche, akwa nchekwa pụrụ iche dị n'elu, na-eyi ọgụ, na-eguzogide ọkọ, UV na-eguzogide ọgwụ, nje na-egbochi mgbochi. Enwekwara ihe nitationomi dị iche iche na - e thatomi nke jikọtara ọrụ na ọdịdị. Otu ahụ abụrụla isi ihe ala dị na afọ ndị na-adịbeghị anya, dabara maka ụlọ, oghere ọha na ebe ahụike.
Otu uru nke LVT bụ nnukwu n degreeomi ya. Ọdịdị elu na mmetụta enyemaka dị ka ihe enyemaka na-eme ka ọ ghara ịpụ iche site na ihe n imomi. LVT nwekwara echiche echebara echiche banyere ntinye. Ma ọ bụ jiri usoro usoro ụkwụ, ma ọ bụ jiri teknụzụ na-ejikọ onwe gị, ma ọ bụ na-agbaso ala ala, ma nwee ike ịkwado ya na akwa ala pụrụ iche iji nweta ihe dị iche iche.
Na ụlọ ọrụ ụlọ ebe a na-ekpochapu mkpochapu ka dị elu, LVT flooring enweela ike ịnọgide na-enwe ọnọdụ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Gịnị kpatara nke a? Ekwenyere m na ị ga-achọkwa ịmata, nri? Taa, m ga-akpọrọ gị ndị enyi ka ị mụtakwuo banyere ịpụ iche nke LVT flooring.
E jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-ekpuchi ala. E jiri ya tụnyere taịl nile seramiiki, ha dị ka nke agba, ederede, mkpebi na mmetụta nkedo, mana LVT dị ọkụ, na-agbanwe agbanwe, na-ekpo ọkụ, na-adị mfe n'ụkwụ, dịkwa mfe ịwụnye. E jiri ya tụnyere ala osisi osisi ọdịnala, mmetụta a na-ahụ anya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, mana arụmọrụ LVT ka mma. Ọ dịghị mfe dị ka ala osisi osisi ọdịnala, ọ dị mfe ilekọta, ọ dịghịkwa mfe ịkọcha ya.
Gịnị mere e ji họrọ ya? O nwere ike izute a dịgasị iche iche nke imewe mkpa, nke mere na ọ bụla ohere nwere ike iyi translucent na mbara. Ọ dị ọtụtụ, ma ọ bụ maka ọfịs ma ọ bụ n'ụlọ, ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị mma, enwere ike ịhazi ya dịka mkpa, ọ nwere ike ịnwe nnukwu uru mgbe ọ na-enwe nkọwa. Ọ bụ ụda na-adọrọ adọrọ na ụda na-egosi, compressive na wear-eguzogide, waterproof na-abụghị ileghara, mgbochi-emetọ na mgbochi nje, green na environmentally friendly, na mfe ịnọgide na-enwe. Na mgbakwunye, ala LVT anaghị ahọrọ oge, enwere ike itinye ya na ebe ọ bụla. Enwere ike ịhụ ya n'ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ egwuregwu, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ọfịs, ebe mgbatị ahụ na ebe ndị ọzọ.
Professional oru e ji mara nke ịkwanyere egwuregwu flooring